Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: ONLF Miyay Guulaysatay Mise Way Isdhiibtay? By: C/salaam Sh Xasan
Maqaal: ONLF Miyay Guulaysatay Mise Way Isdhiibtay? By: C/salaam Sh Xasan
Posted by ONA Admin	/ September 22, 2018
Tan iyo intii uu dhacay kulankii Casmara ee dhexmaray Madaxda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) iyo Itoobiya waxa jira dad badan oo leh ONLF way isdhiibtay iyagoo fikirkooda ku salaynaya heshiiska gogol xaadhka ah ee Itoobiya ay la gashay jabhadu.
ONLF Waa urur xoriyad doon ah . Soomaligalbeed/ Ogaadeniya Waa dhul la guumaysto ururkan ONLF wuxu ku taaganyahay fikir ah in dhulkan la xoreeyo Gumaysiga Itoobiya. Hadafkaasi Waa mid xalaal ah qof walbo oo Soomali ah waa in uu taageero intii karaankiisa ah . Waa dulinimo in aad guumaysi jeclaato xornimana iyo madax-banaanina aad diido.
Intooda badan Soomalidu way ka simantahay aragtida ah in xornimadu sharaf iyo cisi gaar ah tahay laakiin dadku u mawada hagar bixin sidii xor loo noqon lahaa ee Itoobiya looga hoos bixi lahaa. Masahlana hadafkan aadka u khadhaahdka iyo qodxaha badan ee shacabka Soomaali-Galbeed uu qaatay, kaasi oo lagu waayay shacab aad u tiro badan. Dhibaa tooyin badan ayaa soo wajahaya qofka xornimo doonka ah ee naftiisa, maalkiisa, muruqiisa iyo maskaxdiisa u huraya in dadkiisu sharaf iyo karaamo iyo Soomaalinimo ku naaloodo.
ONLF maxay Itoobiya ula heshiisay wakhtigan xaadirka ah?
Waxaad wada ogsoontiin in 10-kii sanee u dambaysay la isku adeegsaday sooshacabka Soomaali-Galbeed dhexdiisa taasina ay dhabarjab wayn ku noqotay halganki mudadada dheer soo socday ee shacabka Soomaaliyeed uu wax kasta oo suuragal ah u huray. Shacabka qaar badan oo kamid ah ayaa maskaxda laga xaday oo wax qaldan lagu shubay. Sido kale Jamhuuriyadii Soomaliyeed ee xorta ahayd waxay si buuxda gacanta ugu gashay Gumaysiga Itoobiya taasna dhib kale ayay halganka ku noqotay.
Malagu guulaysan karay hadafki xornimadoonka Ahaa?
Jawaaabtu Waa maya. Nasiib wanaag isbadal taariikhi ah oo inbadan la saadaalinayay ayaa ka dhacay Itoobiya.
Isbadalkuna sidiisaba fursadna uu noqon karaa hadi si wanaagsan looga faa’iideysto, dhib wayna uu noqon karaa hadii la fahmi waayo sidii looga faa’iidaysan lahaa wakhtiga ku haboon.
Jabhada ONLF bisaylka siyaasadeed iyo waayo-aragnimo ee ay leedahay iyadoo ka duulaysa waxay ku talaabasatay arimahan soo socda oo kala ah sidan:-
1) In gudaha la galo oo shacabkii maskaxda waxa qaldan lagaga shubay dib maskaxda looga xoreeyo.
2) Midnimadii shacabka wada dhashay Ee uu Guumaysigu kala diley lasoo celiyo.
3) In siyaasada Itoobiya saamayn lagu yeesho si looga hortago faragalinta Itoobiya ee ummada Soomaaliyeed.
4) In xidhiidh qorshaysan la layeesho dhaqdhaqaaqa jabhadaha kale Ee Itoobiya kusoo noqdey iyadoo looga danleeyahay sidii aan u heli lahayn xornimadeena .
Hadaba Waxa xusid mudan in meesha loo socda ay tahay in xornimo buuxda oo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed soo celin karta lagaadho taasina aan marnaba laga tanasuli karin hadafkii iyo himiladii shacabku lahaa. Keliya Waxa la badelay wadadi xornimada lagu raadinayay taas waa guul siyaasadeed oo ay jabhada ONLF soo hoyisay in lagu taageerana ay waajib tahay.
Inta aan ka xaqiijinayno hadafkaa xornimada ah ka hor waxaan Itoobiya ka qaadanaynia xaqii aan lahayn oo aan baryo ahayn. Waxaan kaloon ka qayb qaadanaynaa in aan walalaheen Soomaliyeed ka caawino sidii loo soo celin lahaa qarannimadii Soomaaliyeed.
Isku soo wada duubo Jabhada ONLF waxay ku socotaa wadadii hore Ee xornimodoon nimada ahayd marnaba lagama noqonayo taas laakiin dariiqi loo mari laha unbaa la badelay taasoo ka turjumaysa isbedalka iyo marxaladan cusub ee Itoobiya ay cagta saartay.
C/salaam Sheekh Xasan